Itheyibhile yokuthabatha (thabatha): Izibonelelo zokufunda Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Izibonelelo zokufunda itheyibhile yokuthabatha zichaphazeleka kakhulu kubomi bomfundi. Ukukunika umbono, imathematika ayinakho kuphela khuthaza ubukrelekrele yabantwana, indlela yokuphembelela ukusebenza kwabo kakuhle kwezinye iinkalo.
I-Chemistry kunye ne-physics, umzekelo, zifuna iikhonsepthi ezisisiseko zemathematics ukuba zenziwe. Ezinye izihloko ezingacacanga kunokuba zichanekile zisebenzisa amanani afanayo njengebhayoloji, iJografi, kunye nembali, isiPhuthukezi kunye nokubhala.
Ke ngoko, ukwazi itafile yokukhupha ngentloko sisiqalo esihle sokuvana esikolweni nakwimpilo yemihla ngemihla. Bona ezinye izibonelelo.
1 Izibonelelo zokufunda itafile yokuthabatha
1.1 1. Bala iindleko kunye nengeniso
1.2 2. Zilolonge ingqondo
1.3 3. Ukuthatha amanqaku amakhulu
1.4 4. Yiba yingcali efanelekileyo
1.5 5. Yima ngaphandle kwimidlalo
1.6 6. Qonda iikhompyutha
2 Itheyibhile yokuthabatha
2.1 ITHEYIBHILE 1
2.2 2 ITHEYIBHILE
2.3 IBHOKISI YESI-3
2.4 IBHOKISI YESI-4
2.5 IBHOKISI YESI-5
2.6 IBHOKISI YESI-6
2.7 7 ITHEYIBHILE
2.8 8 ITHEYIBHILE
2.9 9 ITHEYIBHILE
2.10 IBHOKISI YESI-10
Izibonelelo zokufunda itafile yokuthabatha
Ukuthabatha yenye yezinto ezine ezisisiseko kwimathematika
1. Bala iindleko kunye nengeniso
Inkcitho yiyo yonke into ephumayo dinero, iresiphi ibuyela umva. Ukuze ube nolawulo lwezezimali, kufuneka uyazi ukuphindaphinda iitafile, kunye nezinye.
Ukujongana nemali kuyinto eqhelekileyo kubomi bomntu wonke kunye nokufunda ukulawula inkcitho kunye notyalo mali kubalulekile ukuze ube nohlahlo-lwabiwo mali olunempilo kwaye ubaleke amatyala.
Bona kwakhona: Ukongeza iitafile (kunye) nezibonelelo zokufunda
2. Zilolonge ingqondo
I-Akhawuntingi inamandla Ukuvuselela ingqondo yakho. Itafile ephindaphindayo engalunganga ibeka ingqondo yakho ukuba isebenze kwaye iziphumo zikhawuleza, zinenjongo kwaye zichanekile.
Ukongeza, ukugcina ingqondo ivuselelwe yindlela yokuthintela izifo ezonakalisa imemori kwaye zibangele ukulibala.
3. Ukuthatha amanqaku amakhulu
Ukuba injongo yakho kukugcina ikhadi lengxelo ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, Zinikezele ekufundeni itheyibhile yokuphindaphinda. Ngamabanga aphezulu, kulula ukufezekisa iholide yamaphupha akho.
Abazali bakho baya kuzingca ngentsebenzo yakho kwaye uya kuba nakho ukonwabela iintsuku zakho zokuphumla ngaphandle kokujongana nokubuyiselwa okanye umngcipheko wokuphinda unyaka.
4. Yiba yingcali efanelekileyo
Amanani anokuchaphazela izigqibo zakho zekamva lomsebenzi. Ukuba ufuna ukuba Injini, Ugqirha okanye ugqirha wezilwanyana kufuneka azinikele kumdla wokufunda isayensi, kubandakanya imathematics.
Kuya kufuneka uqale namhlanje ukuba wenze uqeqesho olunxulumene noko ufuna ukuba kuko xa ukhulile.
5. Yima ngaphandle kwimidlalo
Ukwazi ubuncinci betafile yokuphindaphinda kuya kukunceda uye phambili xa kuziwa kwimidlalo nabahlobo. Yena Imidlalo yebhodi, imidlalo yokucinga kunye nemidlalo. ngokubanzi kubalulekile kumanani kwaye nabani na obalawulayo ngcono aphumelele ekuphumeleleni.
Bona kwakhona: Ukuphindaphindwa kwetafile (amaxesha): izibonelelo zokufunda
6. Qonda iikhompyutha
Iikhompyuter ayisiyonto ngaphandle komxube wee-algorithms ezikwaziyo ukusombulula iingxaki. Ukuba uyazithanda iikhompyuter kunye netekhnoloji, awunakuyihoya inyani yokuba Abalinganiswa abanengqiqo kunye namanani aligazi lobomi koomatshini.
Ukuqonda ukuba basebenza njani, qala kwitafile yokuthabatha kwaye ungene kolunye ulwazi loqeqesho.